कुकर बनाउने वा सस्तोमा सुट बेच्ने बाहानामा कोहि घर आए होसियार ! विहारबाट नेपाल भित्रिए ‘प्रोफेसनल चो*र’ – PanchKhal Online
Home/समाचार/कुकर बनाउने वा सस्तोमा सुट बेच्ने बाहानामा कोहि घर आए होसियार ! विहारबाट नेपाल भित्रिए ‘प्रोफेसनल चो*र’
काठमाडौँ । सस्तोमा सुट बेच्ने भन्दै कोहि तपाईंको घर छिरेको छ, वा भाडाकुँडा अर्थात कुकर बनाउनु छ भन्दै कोहि तपाईंको घर आइरहेका छन् भने सावधान १ अहिले सोही बहानामा काठमाडौंमा चारी गर्नेहरु बढेका छन् । भारतवाट आएका गि८रोह नै सकृय रहेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ । किनकि यस्तो बहानामा घर डकैती गर्ने प्रोफेसनल चो८रहरु नेपाल भित्रिएको खबर छ । उपत्यकामा अधिकाशं घरमा डेरा गर्नेहरु दसैंको समयमा पर्व मान्न घर जाने तथ्य थाहा पाएर दशैं र तिहारको मौका छोपी यस्ता चो८रहरु नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।